10 ထူးခြားချက်များသင့် Blog မှပျောက်ဆုံး | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 21, 2009 ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 28, 2016 Douglas Karr
အဆိုပါ၏အချို့ ငါစာဖတ်သူများထံမှရရှိသောတုံ့ပြန်ချက် ငါဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဥာဏ်တွေအများကြီးမပေးခဲ့ဘူးလို့ပဲ Martech Zone။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ - ငါထင်မြင်ချက်အမျိုးမျိုးကိုယူပြီးသင်၏ဘလော့ဂ်ပရိုဂရမ်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးစာဖတ်သူများအားသူတို့၏ဘလော့ဂ်တွင်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်နှင့်၎င်းတို့အတွက်သေချာစေရန်အင်္ဂါရပ်များစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းပါရှိသည်။
robots.txt - အကယ်၍ သင်၏ဒိုမိန်း၏အမြစ် (အခြေခံလိပ်စာ) သို့သွားပါကဖြည့်ပါ robots.txt လိပ်စာသို့ ဥပမာ - https://martech.zone/robots.txt - အဲဒီမှာဖိုင်တစ်ဖိုင်ရှိပါသလား robots.txt ဖိုင်သည်ရှာဖွေရေးယန္တရား bot / spider / crawler တို့အားမည်သည့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုလျစ်လျူရှုရမည်၊ မည်သည့်လမ်းညွှန်များကိုတွားသွားမည်ကိုပြောသောအခြေခံခွင့်ပြုချက်ဖိုင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သင်၏ sitemap တွင် link တစ်ခုထည့်နိုင်သည်။ တစ်ခုမရှိဘူးလား notepad ကိုဖွင့်ပြီးကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ Robotstxt.org
Sitemap.xml - dynamically ထုတ်ပေးသော sitemap သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုaနှင့်ထောက်ပံ့သောသော့ချက်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် မြေပုံ သင်၏အကြောင်းအရာသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်၊ မည်မျှအရေးပါသည်နှင့်၎င်းကိုနောက်ဆုံးပြောင်းလဲသွားသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ အစဉ်အမြဲငါအသုံးပြုခဲ့သမျှသောအကောင်းဆုံးသော sitemap မီးစက်သည် Arne Brachhold ၏ XML Sitemap Generator။ ၎င်းသည် Live / Bing၊ Yahoo !, Google နှင့် Ask တို့အတွက်မြေပုံအညွှန်းကိုတင်သည်။ (Ask ၏တင်သွင်းသောဝန်ဆောင်မှုသည်အလုပ်လုပ်သောအခါ) ။
လူမှုမီဒီယာအသွင် - ကျွန်ုပ်တွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပါ ၀ င်ရန်သင်ရှာတွေ့နိုင်မည့်နေရာစုံစာရင်းများကျွန်ုပ်၌ရှိသည်။ သတိရပါ - မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကအမြဲတမ်းတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ဦး တည်ရာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်လူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များတွင်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ဘုံအကျိုးစီးပွားရှိသူများနှင့်မိတ်ဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်သင့်ဘလော့ဂ်အားသင့်ဘလော့ဂ်မှသင့်ဘလော့ဂ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ အပေါ်ညာဘက်ထောင့်မှာ၊ ကျွန်တော်ရှာတွေ့နိုင်တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ငါ့ကိုသူငယ်ချင်းအဖြစ်ထည့်ရန်သေချာစေပါ၊
မိုဘိုင်း Compatibility - မိုဘိုင်းအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကြီးထွားလာသည်။ သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုမိုဘိုင်းဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ဖတ်လို့ရလား။ WordPress အတွက်အကောင်းဆုံးသော WordPress မိုဘိုင်းပလပ်ဂင်တစ်ခုရှိသည် ဆိုဒ်သည်မိုဘိုင်းနှင့် iPhone Safari အသုံးပြုမှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
ဖေါ်ပြချက် - မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောစာမျက်နှာတစ်ခုထဲကိုငါရောက်သွားခဲ့ရင်အဲဒါကဘာလဲဆိုတာငါသိသလား။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်စာဖတ်ခြင်းဖြင့်ရိုးရိုးလေးပြောရန်ခက်ခဲသည်။ စာဖတ်သူများအား ၀ ယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်အတွက်မည်သည့်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားသည်သင်၏ဘေးဖယ်ဘားတွင်ကောင်းမွန်သောဖော်ပြချက်တစ်ခုထားရှိခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
Contact Form - ငါဘလော့ဂါနှင့်ဆက်သွယ်ရန်မှတ်ချက်နေရာအပြင်ဘက်ရှိလမ်းမရှိသောဘလော့ဂ်များ၏အရေအတွက်ကိုအံ့အားသင့်မိသည်။ သင့်မှာအဆက်အသွယ်ပုံစံတစ်ခုကိုညွှန်ပြတဲ့လမ်းညွှန်ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသလား။ အဆက်အသွယ်ပုံစံများသည်ဖုန်းနံပါတ်ထက်ထိုးနှက်မှုနည်းပါးပြီးသင့်အားအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုချန်ထားခြင်းကဲ့သို့အန္တရာယ်မရှိစေရန်။
စာမျက်နှာအကြောင်း မင်းကဘယ်သူလဲ၊ မင်းကိုဘာကြောင့်ယုံကြည်သင့်တာလဲ။ သင်၏အောင်မြင်မှုများကိုဖော်ပြသည့်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုရေးရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်သော်လည်းသင့်အတွက်မဟုတ်ပါ၊ the ည့်သည်များအတွက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကဘာကြောင့်သင့်ကိုနားထောင်သင့်သလဲဆိုတာလမ်းညွှန်ပေးပါ။
အိုင်ကွန်တစ်ခု - tabbed browsers များပေါ်လာလျှင် icon တစ်ခုထည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုခွဲခြားရန်လွယ်ကူသည်။ သင်မည်သို့မည်ပုံမသိကြောင်း၊ စိတ်ကြိုက်အိုင်ကွန်မီးစက် ico (icon) ဖိုင်ကို ပြုလုပ်၍ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ပင်ရင်းလမ်းညွှန်သို့တင်ရန်။ အခြားရုပ်ပုံဖိုင်များကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်အခြားနေရာများတွင်တည်ရှိသောပုံများသို့မဟုတ်အိုင်ကွန်များ - မွမ်းမံခြင်းကိုသာပြုလုပ်ပါ ဖြတ်လမ်းအိုင်ကွန် link ကို သင့်ရဲ့ခေါင်းစဉ်၌တည်၏။
ခွင - ဟုတ်ကဲ့၊ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်မှာထုတ်ဝေတာတွေကိုတရားစွဲနိုင်ပါတယ်။ သင်၌ကောင်းမွန်သောအရာများရှိစေရန်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင်၏ပစ္စည်းများကိုကာကွယ်ပါ မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်!
လူမှုမီဒီယာပေါင်းစည်းမှု - မှတဆင့်တင်ပို့ပါ တွစ်တာ နှင့် HootsuiteLinkedIn အီးမေးလ်ပို့ရန် SubscriptionsFacebook နှင့်စုစည်းခြင်းသည်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် စုစည်း ကအများဆုံးစွမ်းရည်ရန်!
Tags: စာမျက်နှာအကြောင်းblog ဖော်ပြချက်contact formမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်အိုင်ကွန်မိုဘိုင်းမြင်ကွင်းrobots.txtမြေပုံအညွှန်းလူမှုရေးခလုတ်များလူမှုမီဒီယာပေါင်းစည်းမှု
အားလုံး Databases ၏မိခင်
22:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 58
link ကိုနှင့်အကြံပေးချက်များအကြီးအစာရင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖော်ပြချက်နှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မှန်ကန်သောအချက်တစ်ချက်ရှိသည်။ ဒါ့အပြင်ငါ့ဘလော့ဂ်ထဲမှာထည့်သွင်းသွား🙂။
22:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 13
ဒါကစာရင်းကောင်းတစ်ခုပါ။ ငါ့မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ ငါဒီနှစ်ခုကိုလှိမ့်ပြီးအကြွေးပြန်ယူမယ်။
22:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 32
ဘလော့ဂ်များပေါ်တွင်အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းနှင့်မကြာမီသင်နှင့်သဘောမတူနိုင်ခြင်းကိုမကြိုက်ပါ။ သဘောတူညီချက်ကဘာလဲ။ ထိုအခါ - အိုး - ငါလွယ်ကူသောလမ်းရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါတွေ့ရှိခဲ့ပါကထည့်သွင်း။
23:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 29
ဒီမှာကောင်းသောအကြံဥာဏ်များနှင့်ဘလော့ဂါများအတွက်ကောင်းမွန်သော 'စစ်ဆေးခြင်း' ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Magik themes များ @ Ashish
14:2011 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 58
ကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်များဒေါက်ဂလပ်၊ မင်းရဲ့ robots.txt မှာအောက်ပါတို့ကိုထည့်သင့်သည်
# Crawlers Setup ကို
တွား - နှောင့်နှေး: 10
# Internet Archiver Wayback စက်
အသုံးပြုသူ - အေးဂျင့် - ia_archiver
# Digg မှန်
အသုံးပြုသူ - ကိုယ်စားလှယ် - duggmirror
သင်၏ ၀ င်ရောက်မှုမှတ်တမ်းကိုစစ်ဆေးပြီးသင်၏ပန်ကရိဒ်ကိုခိုးယူပြီး site ည့်သည်များအတွက်ခဏတာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းမပြုရန်ဤပင့်ကူများကိုတားမြစ်ပါ။